ရွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ရွာ
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Jan 18, 2014 in Local Guides, Travel | 20 comments
ဒီနှစ် သင်္ကြန် ပိတ်ရက်ရှည် မှာ ရွာ မှ ဆွေတော် မျိုးတော်များမှ မဖြစ်မနေပြန်လာခဲ့ကြရန် အမှာ ရှိနေ၍
ယခင် ယခင် လွန်ခဲ့သောလေး ငါး ခြောက် နှစ်ခန့်ကသွားခဲ့သလို အလုပ်ကိစ္စမပါပဲမိသားစု ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ်မျိုးဖြစ်သည်။
ကျတော်တို့နေထိုင်ရာ ဒေသ အကြောင်း ခရီးသွားပို့စ် ရေးချင်ပါသော်လည်း ရေးအုံးမည် ဟူသောအကြံမပါ ခရီးသွားခဲ့ရ၍မရေးနိုင်ခဲ့။အလုပ်ကိစ္စသည်သာ ဦးစားပေးဖြစ်၍ အခြား လေ့လားစရာများ ဖော်ပြပေးစရာခေါင်းထဲမကျန်ရစ်။
ယခု တခေါက် ထွက်ဖြစ်မည် ဆိုပါက ပို့စ်တင်နိုင်အောင်ကြိုးးခဲ့ပါမည် ဟု ကြံစည်ထားပါသည်။
ရွာထဲမှ မိမိသိလိုသော အကြောင်းအရာများကို မန့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပိုစ့် ကို ပြည့်စုံစေ နိုင်မည်ဟု မျော်လင့်မိပါသည်။ ခရီးသွားပိုစ့် မျိုး မရေးဘူး၍လိုအပ်သည်များ မရှိရလေအောင် ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုချက်များကို မျော်လင့်ပါသည်။
ချင်း ပြည် နယ်။
ဟားခါးမြို့။ထန်တလန်းမြို့။ ထိုမှ အနောက်မြောက်ဒေသ အထိ ဖြစ်ပြီး အခြေအနေပေးပါက ထိုထက် ပို နိုင်ပါသည်။
ခင်ဗျားသွားမဲ့နေရာက လူတကာ ရောက်နိုင်ခဲတဲ့နေရာဗျ…ဒီတော့ ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ သေချာနေရာအနှံ့
ဟုတ်ကဲ့ ပါ။ အဲဒီဘက်က ဆိုလာစနစ်နဲ့မီးသုံးကြတာမို့ဘက်ထရီအတွက်တော့သိပ်မပူရလောက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လိုရမယ်ရ တောထဲသွားရတဲ့အခါအတွက် များများဆောင်သွားပါမယ်။ memory 1 TB ထဲ ရသလောက်ရိုက်ခဲ့ပါ့မယ်။ တခြားသိချင်တာမျိုးရှိရင်လဲပြောပေးပါကျတော်ရောက်တုန်းသေချာလေ့လာခဲ့ပေးချင်လို့ပါ။
ကျေးဇူးပါ U Kyeemite ရေ ။
တိန်.. new tourist destination မို့လို့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ နေရာပါ.. အခုတလော ခေါင်းပေါ် အထုတ်တစ်ထုတ် တင်ထားသလို ဖြစ်နေရတဲ့ နေရာပါ.. ဆက်သွယ်ပါမည်..
ဆက် သွယ် ပါ ။
သိ ချင် တာ ရှိ ရင် မှာပါ။
တတ်နိုင် သလောက် ဆောင် ရွက် ပေးပါမည်။
အဲဒီ ခရီးသွားပို့စ်ကို မျှော်နေမယ် ဗျို့
(ဘယ်ဝတ္ထုလဲ…သိလား.. ?? )
တိမ်နဲ့ ချည်တဲ့ ကြိုးး
တိမ်နဲ့ ချည်တဲ့ ကြိုး..ဆိုရင်တော့….
၀ိတိုရိယတောင်ခရီးစဉ်တော့ ဓာတ်ပုံကိုကျော်သူ တင်တာတွေ တွေ့ရတယ်။သဘာဝအလှတွေ သိပ်သဘောကျမိပါတယ်။သူတို့ ရိုးရာ ဓလေ့တွေ မေးမြန်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါနော်။လွင်မိုးခရီးသွားနေသည်ထဲက ချင်းရိုးရာ နတ်တင်တာတွေလည်း အမှတ်တရ ရိုက်ခဲ့ပါ။
အကြံပြုချက်များ နှင့် မန့် ပေးသော စာ များ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနော့ အတွက် ချင်း ချည်ထည်လေး ဝယ်ခဲ့သင့်ပါတယ်လို့၊
ဒီ အကြံပုချက်ကတော့ ဟင်းးး တော်တော်အကျိုးပုတယ်
ဘက် ဂျက် အခြေ အနေ အရ ချည်ထည် တခုခုတော့ ရမည် လို့ပဲ။
ချင်းလုံမတွေ တယ်ဂွတ်သနော.. တွေ့လို့တော့ အပါဆွဲခေါ်လာခဲ့..
ဦးကြောင် ယူအက် က အင်ဒီယားနား မှာ အများကြီးပဲ
ခရီးစဉ်​အစမှ အဆုံးတိုင်​ ဒိုင်​ယာရီသ​ဘော​လေး​ရေးရင်​ကောင်းမယ်​ထင်​တယ်​ ။
မိမိအမြင်ခံစားချက်က သတ်သတ် ခွဲတင်ပါ့မယ်။
တကယ့်ကို ရောက်ရခဲတဲ့ခရီးမို့ ကိုယ်တိုင်သွားဖို့ဆိုတာ ဒီတစ်သက်မှာ ကြုံဖို့မလွယ်လို့ မင်းခန့်ကျော်ရဲ့ခရီးကို လိုက်ပါခံစားရအောင် မျှော်နေပါမယ်။
သဘာဝအတိုင်းပေါက်တဲ့ ပန်းပင်တွေ၊ ရေမြေတောင်တောင် သဘာဝတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဓလေ့ရိုးရာတွေ၊ နေထိုင်မှုစရိုက်လေးတွေ အများကြီး အများကြီး မြင်ချင်ပါတယ်။
သွားတာဖြစ်ဖြစ်၊ပြန်တာဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားပိုစ်အတွက်ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ မယ်ဆိုရင်
ဟားခါးနဲ့အိုက်ကားရွာကြားက ရွာကြီး(နာမည်မေ့ နေတယ်)က ချင်းစော်ဘွားတစ်ဦးရဲ့ 
တစ်ထပ်စာ အိမ်အတွက်တိုင်ခြေတံ သုံးထပ်စာလောက်မြင့် ဆောက်ရတဲ့ဖလမ်းမြို့ 
့တောင်ကမ်းပါးစောင်းကအိမ်တွေ အနောက်ဖက်ကနေရိုက်ခဲ့ ။
ထူးခြားတဲ့ရိဒ်ရေကန်ကြီးကို စစ်တပ်ကုန်းပေါ်ကနေရိုက်ခဲ့ ။
အင်္ဂလိပ်တွေကို စီယင်းအမျိုးသားတွေနဲ့ အတူအမျိုးသမီးတွေပါအသေခံတိုက်ခဲ့ တဲ့zongkong လမ်းခွဲနားက သမိုင်းဝင် sialum (ရှာလုမ်း)ခံတပ်ကိုလဲရိုက်ခဲ့ ။
ဖလမ်း၊တီးတိန်လမ်းခွဲ အထက်နားက အင်္ဂလိပ်တွေ ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းသိမ်းဖို့အခြေချစခန်းထိုင်ခဲ့ တဲ့ 
်fort white ခံတပ်နားက လေသာတောင်(ကနေဒီတောင်) တဝိုက်ပေါက်နေတဲ့ တောင်ဇလပ်ပင်တွေကို
အိမ်ကိုသံတစ်ချောင်းမှမကူ၊ သဘာဝကျောက်ပြားမိုး ရိုးရာအတိုင်းဆောက် အိမ်ရှေ့ ပျဉ်ကပြင်ကျယ်ခင်းထားတဲ့တီးတိန်
မြို့ နယ်ထဲကရှေးအိမ်လေးတွေကိုလဲ ရိုက်ခဲ့ ။
အိမ်ရှေ့ မျက်နှာပြင်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဦးချိုပုံတွေကို ရိုက်ခဲ့ ။
ရွာဝင် ရွာထွက်ထိပ်က ခရီးသွားများအမောပြေ အပန်းဖြေဖို့ (ဇရပ်) ကျောက်ပြားတွေထူ ကျောက်ပြားတွေ
ခင်းထားတဲ့ ဘေးက ရှေးအဘိုးအဘွားတို့ ရဲ့ကျောက်စာပြားတွေကိုတွေ့ ခဲ့ ရင်လည်း ရိုက်ခဲ့ ။
တကယ်လို့ များ ချင်းပြည်တောင်ဘက်ပိုင်းများသွားခဲ့ ရင်
မင်းတပ် မတူပီလမ်း မိုင်တိုင်၁၁နားက အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ကတုတ်ကျင်းဟောင်းနဲ့ကားလမ်းဘေး
တစ်လျှောက် သဘာဝအတိုင်းပေါက်နေတဲ့ စတော်ဘယ်ရီပင်တွေကိုရိုက်ခဲ့ ။
မိုင်၃၀နားက တောင်ကြောပေါ်ဖောက်ထားတဲ့စစ်ကြီးအတွင်းကလေယာဉ်ကွင်းဟောင်းကိုလည်းရိုက်ခဲ့ ။
မိုးပီ(သေမင်း)တောင် မြက်ခင်းတောင်စောင်းက ခပ်ရိုင်းရိုင်းပေါက်နေတဲ့ထင်းရှူးပင်ထက်က သစ်ခွပန်း
တွေကိုလည်း မှိုင်းမှုန်တွေကြားကရိုက်ခဲ့ ။
အဲဒီတောင်တစ်လျှောက်က ချိုချဉ်ချိုချဉ် နီညိုရောင် နှင်းသီးတွေကိုလဲရိုက်ခဲ့ ။
မတူပီရောက်ခဲ့ လို့ ရှိရင် ကျောက်တိုင်ကွင်းနေရာကနေ ဟိုးမြောက်ဘက် ဆယ်မိုင်အကွာလောက်က
ကျောက်ကမ်းပါးမှာ ၃ဆင့် ကျ ထင်ထင်ရှားရှားလှမ်းမြင်နေရတဲ့ဘုံတလာ ရေတံခွန်ကြီးကိုလည်း
ရိုက်ခဲ့ ။ ။
ရိုက်ခိုင်းတာများသွားလို့ခေါင်းမူးသွားရင် ကျနော့ ကိုလည်းရိုက်ခဲ့ ။
ကျနော် ရိုက်ချင်တဲ့ နေရာတွေကို စိတ်အဆာပြေပြောနေတာ။ တကယ်က ဒီ့ ထက်မကအများကြီးပဲ။
ကိုမင်းခန့် ကျော်ရဲ့ရွာခရီး အဆင်ပြေပါစေ။
ကျတော် က အလည်ခရီးပါ။
စကားက တအားကွဲတော့ သိပ်အဆင်ပြေပါ့မလားလို့။
နောက် ကျတော်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာက မြန်မာပြည်ရဲ့
နအဖ လက်ထက်က လက်ဖက်ပင်တွေကျန်သေးရင်